Mogadishu Journal » Inter Milan oo qorsheysay saxiixa Christian Eriksen
Mjournal :-Tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa doonaya inuu la soo wareego Christian Eriksen hadii kubadsameeyaha Tottenham uusan saxiixin heshiis cusub.
Inter Milan ayaa u dhaqaaqi doonta sidii ay Christian Eriksen ugu soo wareejin laheyd Serie A bisha Janaayo hadii uusan daneyneynin inuu saxiixo heshiiska uu kula joogo Tottenham.
Eriksen ayaa la filayay inuu xagaagan ka tago White Hart Lane, iyadoo Real Madrid ay aad ugu dhaweyd inay la soo wareegto ciyaaaryahanka.
Laakiin markii uu xirmay suuqa kala iibsiga Yurub habeenkii Isniinta, 27 jirkaan ayaa ahaa la xaqiijiyay inuu sii ahaanayo ciyaaryahan Tottenham ah, iyadoo kooxdu aysan helin wax dalab rasmi ah oo ku aadan xiddiga reer Denmark.
Eriksen qandaraaaskiisa wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan, waxaana uu diiday inuu saxeexo heshiiska cusub ee Spurs ay u soo bandhigtay isaga.
Xiddiga qadka dhexe, oo haatan isku diyaaarinaya waajibaadka caalamiga ah ee Denmark ooo wajahaya Gibraltar iyo Georgia, ayaa ku adkeystay Talaadadii inuusan ka qoomameyneynin inuu ku dhaqaaqi waayo suuqa xagaaga.
Laakiin hada macalinka cusub ee kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu Eriksen geeyo San Siro marka dib loo furo suuqa bisha Janaayo.
Spurs ayaa soo bandhigtay heshiis cusub oo ku kacaya 200 kun ginni isbuucii – laakiin Eriksen ayaa iska fogeeyay dhamaan dadaaladii ay waday kooxdiisa.
Inter ayaa 74 milyan ginni ku qarash gareysay suuqa, iyadoo lasoo wareegtay Romelu Lukaku xagaagan, waxaana ay badiyeen labadii kulan ee furitaanka Serie A ee uu maamulay tababare Conte, laakiin tababarihii hore ee Chelsea ayaa isha ku haya xaalada Eriksen, wuxuu u dhaqaaqi doonaa hadii xaalada heshiiska aan la xalin bisha Janaayo.